> Resource> Utility> otú ndozi hal.dll Ne Error
Gịnị bụ Hal.dll?
Hal.dll pụtara Hardware Abstraction Layer Dynamic-njikọ Library. Ọ bụ ihe na sistemụ faịlụ (na-emekarị n'okpuru C: \_ Windows \_ system32 \_ nchekwa) na njikọ ngwaike na software components nke a na kọmputa. Na Hal.dll faịlụ, sistemụ nwere ike arụ ọrụ na a ngwaike ngwaọrụ.
Gịnị mere Hal.dll na-efu?
Hal.dll efu njehie ozi ga-ewetara ruru ka na-esonụ:
1. kwesịrị ịdị mebiri emebi
2. ehichapụ ma ọ bụ kwaga mmadụ na mberede si mbụ ya na-aga.
3. A mebiri emebi ma ọ bụ merụọ boot.ini faịlụ.
4. The ike mbanye na ahụ mebiri emebi.
5. Hal.dll adịghị adị na Windows Vista, Windows 7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị Windows usoro, ma ọ bụrụ na Nna-ukwu gị buut Record (MBR) agbanweela na ụdị na dakọtara na Windows XP ma ọ bụ gara aga, ndị MBR ka ga chọọ ike mbanye maka otu .dll, ọ bụrụ na ọ dịghị ebe ahụ, a Hal.dll efu njehie ozi ga-eme.
Olee otú Idozi Hal.dll efu njehie?
Firstly eme ka n'aka gị boot.ini faịlụ dị na idụhe emehie na ya. Ọ bụrụ na ị ka na-enweghị buut elu kọmputa gị na a ozugbo okwu "Hal.dll na-efu", i nwere ike na-agbalị ịrụzi draịvụ ike gị MBR na idozi Hal.dll efu njehie na Wondershare LiveBoot. Ọ bụ ngwá ọrụ dị ike ka buut elu ọ bụla na kọmputa, n'agbanyeghị n'agbanyeghị ihe mere ya okuku. Nke a LiveBoot-enye gị ohere buut elu Windows usoro na CD / DVD ma ọ bụ USB mbanye.
Nzọụkwụ 1. Mepụta bootable CD / DVD ma ọ bụ USB mbanye na Liveboot (mfe arụmọrụ).
Nzọụkwụ 2. Fanye CD, DVD ma ọ bụ USB mbanye, na-amalite na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3. Họrọ "buut si LiveBoot" na buut NchNhr ịbanye usoro.
Nzọụkwụ 4. Họrọ "Windows Iweghachite" na pịa buut Njikwa Iweghachite idozi hal.dll efu njehie.
Nzọụkwụ 5. Mgbe buut File Iweghachite zuru ezu, Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa ịhụ ma ndị hal.dll efu njehie bụ ofu ma ọ bụ.
Nzọụkwụ 6. Ọ bụrụ na hal.dll efu njehie bụ ka e nwere, Malitegharịa ekwentị ka LiveBoot ọzọ ma họrọ MBR Iweghachite idozi kwere omume na njehie na MBR.
Ozugbo i ofu Hal.dll efu njehie, iwepụ ụda CD / DVD ma ọ bụ USB mbanye. Ugbu a, i nwere ike buut elu gị na kọmputa na-ahụ gị maara desktọọpụ ka nkịtị.
Ọ dịghị Free Trial dị. Mụta ihe banyere Wondershare LiveBoot buut CD
Disk rụkwaa Software: Rụzie diski ike & Get Data Back
Ụzọ na-Idozi Oge ojiri gaa Error na Internet Explorer